Thursday November 08, 2018 - 09:44:08 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Wararka ka imaanayo wadanka Sucuudiga ayaa sheegaya in wasaarada arrimaha diinta iyo awqaafta wadankaas ay soo saartay go'aan ka dhan ah Jumciyaadka Kheyriga ah ee ka shaqeeya faafinta diinta Islaamka gaar ahaana madaarista lagu barto qur'a
C/Caziiz Aala Sheekh wasiirka Tacliimta Sacuudiga.
Warbaahinta dalka sucuudiga ayaa sheegtay in Cabduladiif Aala Sheekh oo ah Waziirka wazaarada Arrimaha diinta iyo Awqaafta wadanka Sucuudiga uu soo saaray go’aanno lagu mamnuucayo Tartamada Qur’aanka kariimka Safarada ay bixiyaan madaarista iyo Mahrajaanaadka loo qabto carruurta si loogu dhiiri galiyo xifdinta Qur’aanka.
Bayaanka lagu mamnuucayo Nashaadaadka dacwo ee kasoo baxay wazaaradda ayaa loo qeybiyay dhammaan furucda ay wazaaraddu ku leedahay gudaha wadanka Sucuudiga waxaana jira caro xooggan oo arinkan laga muujiyey.
Cabdul Caziz Aala Sheikh ayaa sheegay in uu doonayo in Jumciyaadka iyo Madarista diiniga ah aysan ka bixin wixii loo aasaasay oo ah xifdinta qur’aanka kariimka, aysana ku mashquulin wax ka baxsan wixii loo yagleelay, taas oo uu ku tilmaamay In sii wadisteeda laga dhexlay oo kaliya faafinta afkaar ku dhisan argagixisanimo sida uu hadalka u dhigay.
Waxa uu ku booriyey Jumciyaadka iyo Madaarista qur’aanka inay la dagaalamaan wax uu ku sheegay, Afkaar soo galooti oo wax dumis ah, carruurtana ay ka ilaaliyaan in caqiidada saxda ah laga leexiyo, sida uu hadalka u dhigay Dad badana waxa ay arrinkaas ku fasireen inuu waziirku kasoo hor jeedo is dhex galka madaarista diiniga ah, si ay u kala faideystaan kheyrka, caruurtana ay ugu dhiiradaan sii wadista barashada qur’aanka kariimka ah.
Dadka sucuudiyaanka ah ayaa arinkan si aad ah uga hor yimid, waxaana la arkayey kumanaan dad ah oo jawaab ka bixinaya hadalka kasoo baxay Wazaarada Arimaha dinta iyo awqaafta sucuudiga, go’aankaas oo ay ku tilmaameen mid caruurta ka burinaya Xalaqaadka lagu xifdiyo qurkaanka.
Qof kamid ah dadka sucudiyaanka ah ee go'aankan sida adag uga hor yimid ayaa bartiisa twitterka kusoo qoray, "Nashaadaadka dacawiga ah ee Jumciyaadka iyo Madaarista ay sameeyaan iyo Tartanada Qur'aanka, ma ahan wax go'aankeeda ay iska qaataan macaliminta oo kaliya, balse waxa ay ku timaada raali ahaanshaha waalidinta, iyagoo kaga gol leh in carruurtooda ay jecleysiiyaan waxbarashada, kana fogeeyaan inay noqdaan kuwa dariiqyada taagan, oo aan ognahay dhibaatada naga heysata maanta, kuwaas oo ku caan baxay Kufsiga gabdhaha, Mukhadaradka, Mugaamaradka ay naftooda halista ku galinayaan iyo kudayasho kasto oo fool xun, sidaa darteed haddii ay jirto wax mulaaxada waxaa habooneyd in hay'adda ay arrinkan bogaadiso ee ma ahayn inay mamnuucdo, Arrinkan ma ahan mid u cuntama dadka musliminta ah ee ku nool dhulkii waxyiga iyo kheyrka"ayaa lagu yiri war lasoo dhigay Social Media.
Go’aankan ayaa ah mid nooociiisa oo kale wali uusan wadankan soo marin waxa uuna qeyb ka yahay isbadalka ay waddo dowladda Sucuudiga, kaas oo ay ku dooneyso inay noqoto dowlad furfuran, lana jaan qaadi karto wadamada reergalbeedka, waxa uuna imaanaya bilo kadib markii xukuumada Aala Sucuud ay ogolaatay in gudaha dhulka xarameynka laga dhiso kaniisado ay leeyihiin Salibiyinta, sidoo kalena ay Shanemoyin ka furtay magaalooyinka Riyadh, Jidah iyo Madiinah.
Maamulka Aala Sucuud ayaa si kasta ula dagaalamay faafinta towxiidka iyo in jiilka soo koroyaa ay noqdaan kuwa mawaalaatka uu ukala soocan yahay, waxa ayna ku dadaaleysa sidii ay dhalinyarada ugu mashquulin laheyd dhal dhalaalka dunida, iyadoo ku ciriirinaysa culimada iyo ardayda goobaha lagu barto kheyrka, iyo xalaqaadka cilmiga ah.